Iseti yesidlo sangokuhlwa seCrackle glaze
Inkcazelo: Crackle glaze isidlo sangokuhlwa
I-Crackle glaze yenye yemibala yokudala yokukhanya.
Kukwakho ne-glaze ekhethekileyo kuba mininzi imigca emincinci yokuqhekeka kumphezulu womzimba we-ceramic, kodwa umzimba ongaphakathi awunangqushu. Imigca yokuqhekeka inomhombiso okhethekileyo kwimveliso.
Iseti yombala wokuyila wesidlo sangokuhlwa
I-glaze yoyilo yenye ye-glaze ekhethekileyo, umzi-mveliso uya kongeza into ethile yentsimbi kumbala we-glaze, kwaye umbala we-glaze uza kubonisa umbala owahlukileyo omangalisayo nge-Oxidation okanye ngokuCutha ukudubula kwitonela yeziko. Njengoko le yindlela yokusabela kweekhemikhali kunye ne-oxidizing reaction, akukho namnye owaziyo ukuba i-glaze iya kubonisa umbala kunye nothando ngexesha lokudubula. Ke i-glaze esiyibiza ngokuba YINYE KUNYE KUPHELA umbala wombala.
Ngoku siphinde sadala enye yothando lomhlaba, sayibiza ngokuba yi-Speckle color glaze, inokubonisa amachaphaza amancinci kumphezulu xa uchukumisa imveliso ngesandla.
Umbala omenyezelayo ngombala
I-speckle color glaze yenye yeendidi ze-Creative glaze; Lubuchwephesha obukhethekileyo, yeyiphi imveliso eya kongeza into yentsimbi kwimbala yeglasi, emva koko upeyinte irim. Umbala we-glaze uza kubonisa umbala ohlukileyo ngokumangalisayo nge-oxidation okanye ukunciphisa ukudubula kwi-tannel ye-Tunnel. Njengoko le yindlela yokusabela kweekhemikhali kunye ne-oxidizing reaction, akukho namnye owaziyo ukuba i-glaze iya kubonisa umbala kunye nothando ngexesha lokudubula. Ke i-glaze esiyibiza ngokuba YINYE KUNYE KUPHELA umbala wombala.